Basikety - Coupe du Président : Norombahin’ny MBALL sy ny GNBC -
AccueilRaharaham-pirenenaBasikety – Coupe du Président : Norombahin’ny MBALL sy ny GNBC
16/04/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Nikatona ny ridaon’ny fiadiana ny « Coupe du Président » eo amin’ny taranja basikety, sokajy N1A lahy sy vavy, andiany fahefatra. Tontosa omaly, tetsy amin’ny lapan’ny Fantanjahantena Mahamasina mantsy ireo lalao famaranana. Tomefy ary tototra mpijery ny Lapan’ny Fanatanjahantena tamin’izany.
Teo amin’ny sokajy N1A lehilahy, dia norombahin’ny GNBC Vakinankaratra ny « Coupe du Président » andiany fahefatra rehefa nanilika ny Ascut Atsinanana tamin’ny isa tery 98 noho 92 izy ireo. Raha ny fizotry ny lalao, dia niady hatrany am-boalohany ny fihaonan’ny roa tonta tamin’izany. Saika nifanenjika hatrany mantsy ny isa teny amin’ny tabilao. Nitarika hatrany ry zareo avy any Vakinankaratra tao anatin’ny ampahefa-potoana efatra amin’ny fe-potoana ara-dalàna ary nanenjika ny Ascut. Nifamaliana ny fanafihana avy amin’ny andaniny sy ny ankilany. Nanao ny ainy tsy ho zavatra ry Tolotra sy Tanjona ary ry Ibrahim sy Did’s sy ny namany avy amin’ny Ascut, saingy nanohitra tamin’ny alalan’ny tanjaka ara-batana sy ny fanafihana mahery vaika sy haingam-pandeha ry Mory sy Zezy ary ry Elly sy Ricky, sns, avy amin’ny GNBC. Na izany aza, nampiseho ny fahaiza-manaony sy ny traikefany ireo mpilalaon’ny Ascut saingy tsy tafavoaka.
Teo amin’ny sokajy N1A vehivavy indray, dia tafavoaka tompondakan’ny “Coupe du Président” andiany fahefatra ny MB2ALL Analamanga rehefa nandavo ny SBBC Boeny tamin’ny isa mazava 62 noho 49. Teo amin’ny ampahefa-potoana telo voalohany ihany no niady ny fihaonan’ny roa tonta, satria norohitin-dry Sydy sy ry Mioura sy ny namany amin’izany ny isa tany amin’ny ampahefa-potoana fahefatra farany, ka natafavoahan’izy ireo mpandresy. Nanohitra ry zareo avy any Boeny, saingy tsy tafavoaka nanoloana ny paikady sy ny teknikan’ireo mpilalaon’ny MB2ALL.
Ho an’ny fiadian-toerana indray, dia mitana ny laharana faharoa teo amin’ny sokajy vehivavy ny Fandrefiala Analamanga rehefa nandresy ny Tamifa avy any Amoron’i Mania tamin’ny isa mavesatra 99 noho 58. Fahatelo teo amin’ny lehilahy indray ny ASCB Boeny rehefa nanilika ny Cosfa Analamanga tamin’ny isa 92 noho 87.
Ankoatra izay, tonga nanome voninahitra ny fifaninanana amin’ny maha mpiahy azy ny Filohan’ny Repoblika, Hery Rajaonarimampianina. Izy rahateo ihany koa no nanolotra ny amboara ho an’ny tompondaka teo amin’ny lehilahy. Tonga nanotrona ihany koa ireo mpikambana avy eo anivon’ny governemanta sasantsany toa ny minisitry ny Fanatanjahantena, Jean-Anicet Andriamosarisoa, sy ny minisitry ny Serasera, Harry Laurent Rahajason.